MinerGate: Sidee loo rakibaa barnaamijkan 'Miner Software' GNU / Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Mararka kale, waxaan wax ka qornay mawduucyada Macdanta Dijital ah iyaguna xiiso weyn ayey u hayeen akhristayaasha. Mararka qaarkood, mowduucyada laga hadlay ayaa ku saabsanaa Sidee loo hagaajiyaa GNU / Linux OS-ka Macdanta Dijital ah?, waqtiyo kale waxay ku saabsaneyd wax cayiman GNU / Linux OS oo ku habboon Macdanta Dijital ah ama si fudud fikradaha aasaasiga ah ee la xiriira aagga of Macdanta Dijital ah, Cryptocurrencies, Blockchain ama FinTech.
Fursaddan, waan ka hadli doonnaa Barnaamijka MinerGate iyo sida loogu rakibo bartayada OS GNU / Linux. Waan dooranay MinerGate, tan iyo, on the Nidaamyada Howlgalka ee MS Windows, waxaa badanaa loo adeegsadaa waxtarkeeda iyo fudeydkiisa, iyo adkeynta iyo isku halaynta barxadeeda.
Kahor intaadan si buuxda u galin mawduuca, way fiicantahay in la xasuusto in si fiican loo fahmo arrimahan la xiriira Macdanta Dijital ah, Cryptocurrencies, Blockchain ama FinTech, waxaa jira qaar hore oo xiiso leh qodobbada la xiriira gudahood Blog-geena, oo ay fiicnaan lahayd in la akhriyo ama dib loo akhriyo, oo aan ka mid nahay kuwa soo socda:
1 Waa maxay MinerGate?
2 Ku rakibida MinerGate
2.3 Tallaabada 3
2.4 Xusuusin kama dambays ah
Waa maxay MinerGate?
MinerGate asal ahaan waa a Macdanta Software, laakiin sidoo kale waa magaca ah Dijital Macdanta madal online ah waxaa bixiyay arjiga la yiri.
Sida laga soo xigtay boggooda rasmiga ah madal iyo software waxaa lagu tilmaamay sida:
"MinerGate waa sanduuq lacageed oo badan oo macdanta laga sameeyay oo ay abuurtay 2014 koox ka mid ah dadka jecel xannibaadda xannibaadda. Waxaan bixinaa barnaamijka ugu fudud ee macdanta, adeeg la isku halleyn karo oo 24/7 ah iyo bulsho waxtar leh oo aad u baahan tahay.".
"MinerGate xFast GUI Macdan waa adeegsi fudud oo sifiican loo adeegsan karo, soona bandhigida barnaamijyada macdanta. Iyada oo ku saleysan qaab dhismeedka lambarka cusub, dalabku wuxuu soo bandhigayaa wax soo saar hash ah oo cajiib ah, taasoo ka dhigaysa khibradaada macdanta xitaa waxtar badan.".
Ku rakibida MinerGate
Nota: Si loo fuliyo casharradan iyo rakibaadda waxaan u adeegsan doonnaa nooc yar oo la habeeyay oo la hagaajiyay Distro MX Linux 19.X wac Mucjisooyinka 2.0, taas oo horeyba loogu sii hagaajiyay shaqooyinkan, sida ku cad casharkeenii hore ee loogu talagalay. Intaa waxaa dheer, waxaa wanaagsan in la ogaado in nooca hadda jira ee MX Linux 19.X waxay ku saleysan tahay Debian GNU / Linux 10 (Buster).
Soodejiso Barnaamijka Macdanta
Tan awgeed waa inaan u tagnaa Qaybaha soo dejinta of website sheegay oo soo dejisan nooca hadda jira ee loo heli karo GNU / Linux. Waqtiga qorista maqaalkan, waxay u socdaan version deggan 1.7, kaas oo kugula talinaya in lagu rakibo Ubuntu. Softiweerkan wuxuu la yimaadaa ama aan lahayn interface garaaf ah, taasi waa, wuxuu ku yimaadaa nooc Desktop (GUI) iyo mid kale oo loogu talagalay Goob -joogga (CLI).
Marka mid ama labada noocba la soo dejiyo, nooc (yada) isku mid ah ayaa lagu rakibi karaa iyadoo la isticmaalayo maareeyaha xirmada garaafka ama garaafka dookhaaga, iyo qaabka aad dooratay. Casharkeena, waxaan u adeegsan doonaa amarka «dpkg». Iyo sida soo socota xirmada GUI:
Tan iyo markii, waxaan horey u isticmaaleynaa GNU / Linux Distro Mucjisooyinka 2.0, amarka «dpkg» kaliya soo sheegaysaa la'aanta ah ku tiirsanaanta ama maktabadda ku xiga: «libqt5websockets5». Midkee, horay ayaan u rakibi karnay si aannaan ugu arkin qalad la sheegay, haddii la adeegsado Qalabkan. Haddii ay dhacdo in la isticmaalo Ubuntu, Debian, MXLinux ama wax kale oo la mid ah ama aan ahayn, xusuusnow inaad hagaajiso OS-gaaga, sidaan tan ku sheegnay maqaal hore, oo aan si joogto ah u cusbooneysiinno.
Khaladaad kasta oo kale oo aan la filayn, waayo ku-tiirsanaanta ama maktabadaha, waxaa lagu xalin karaa adoo garaacaya mid ka mid ah 2 amar, ama u dhigma sida ay tahay GNU / Linux Distro loo adeegsaday:
Haddii ay dhacdo in si guul leh loo fuliyo rakibaadda, waxa kaliya ee harsan waa in la bilaabo arjiga la yiri, oo ay tahay inuu maro toobiye la yiraahdo MinerGate gudaha Liisaska codsiyada, qaybta Xafiiska. Hadana haddii aysan jirin wax dhibaato ah, qaar aan la aqoon ama aan la ogaan, waa inuu si fiican u furnaadaa, si aad u soo gasho taada email on garaafka garaafka ee barnaamijka iyo gasho. Xusuusnow inay tahay inaad marka hore iska diiwaangeliso Madal MinerGate si si hufan looga faa'iideysto Software.
Xusuusin kama dambays ah
Marar badan kuwan Digital Macdanta Software u baahan baakado iyo maktabadaha fiidiyow (NVidia, AMD iyo Intel) in sifiican loo shaqeeyo. Arinta MinerGate, noocaaga terminal «MinerGate-xFast-cli-1.7-ubuntu.deb», waxay u baahan tahay rakibidda «nvidia-cuda-dev», taas oo u baahan ku xiran tahay GNU / Linux Distro loo adeegsaday, si loo soo dejiyo xirmooyin taxane ah oo culeyskoodu dhan yahay 600 MB
Xaalado badan, ficilkan waxay nidaamka ka dhigi kartaa mid aan degganeyn haddii aan si habboon loo qaabeyn, ama aadan haysan qalabka ku habboon, ama kaba sii daran, waxaad codsan kartaa inaad tirtirto mid kale xirmooyinka lagama maarmaanka ah oo ka tag adiga GNU / Linux Distro dhib leh ama aan la isticmaali karin. Marka taxaddar, kiiskan gaarka ah.
Maqaal kale oo soo socda, waxaan ku dooran doonnaa mid kale Digital Macdanta Software in la isku dayo dhowr, inyar.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan Digital Macdanta Software loo yaqaan «MinerGate», taas oo ah mid ka mid ah kuwa ugu badan ee loo isticmaalo fudeydkiisa, wax ku oolnimadiisa iyo sumcadda la aqoonsan yahay ee 'Crypto Platform' ee keenta; noqo wax badan dan iyo utility, Dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » MinerGate: Sidee loo rakibaa barnaamijkan 'Miner Software' GNU / Linux?
Fedora 33 waxay u wareegi doontaa Vi for Nano oo joojinta taageerada BIOS ayaa laga wada hadlay
Mandrel: a GraalVM distro loogu talagalay dhismaha Quarkus